Ninka ku neceb ama ku nacay sida aad ku ogaan karto
Ninka ku neceb ama ku nacay sidee ku ogaan kartaaa?
Waa nin nuucee ah? Ninkii hore ee kugu dhihi jiray Erayo Jaceyl ma yahay ama naxariista badnaaa? Mise waa isbadalay oo xarigii ayuu goostay?
Haddii aad dooneysid inaad ogaatid ninka ku neceb ama kaa xiiso dhigay waxaad ku arkeysaa calamadahaan soo socdo...
No Erayo Jaceyl, No romantic, No xushmad, No qoraal, No waqti. No Macaanto. No Waan kuu xiisay.
Shalay: Macaan badan, naftey uroonadeyda, aayihii mustaqbalkeyga iyo erayo jaceyl oo lamid ah.
Hadalkiisa wuxuu ku soo koobaa tusaale haddii aad tiraahdi Qalbi ama Xayaatii Sidee tahay? Xaaladda ka waran?
Jawaabta uu ku siinayo waa mid gaaban sida: fiican, marka aad Wax weydiisidna Haa ama Maya wax dhaafsiisan kuma Arkeysid, Ogoow wuxuu sidaas kuu Dhahaayo waa Dhibsasho uu dhibsanaayo Hadalkaaga, oo wuxuu ku dareensiinaa inuu kaa Xiiso dhacay, Agtaadana uu ku Caajisay, wuxuuna kuu Sheegayaa Mar walba inuu Mashquul yahay.
Goorta aad u sheekeyneysid kuma daawaanayo oo wuu is dabaalinayaaa ama iska kaa mashquulinayaaa asigoo dhinacyada eegayo, sababtoo ah wuxuu dhibsanayaa hadaladaada iskaba daa in uu ku dhaho erayo jaceyl, intaasi waxaa u dheer halaaqyo ama hamaansi badan sida qof daalan oo xalay dhan dhafrayay ama hurdadu ku yar tahay, ogow waxa uu ku caajisayaa waa uun hadalkaaga Ee ma awoodi weynin in uu kuu dhaho macaan badan, Qalbi, nolosheyda, Mustaqbalkeyga iyo Erayo jaceyl oo lamid ah.
Ninkeyga sidii hore iima ma ahan? markaan isbaraneynay ama inta uusan iguursan wuxuu ahaa nin kaalay iska arag ah oo wuxuuu idhihi jiray Erayo jaceyl oo Soo jiidasho leh laakin guurka kadib Xamadiyeey ama Caashooy ayuu iigu yeeraaa iskaba daaa qaali, babe iyo honey.
Hadaba iska ilaaali qof nuucaas hadii aad ka weysid erayo jaceyl ama kuwo naxariis leh qofkaasi waa qof kaa quustay oo aaan rabin in uu kula sii joogo.
Waxaa sidoo kale ku ogaan kartaaa goorta aad isbaraneyseen wuxuu ahaa nin soo jiidasho badan oo isticmaalo erayo jaceyl ah, hadiyado qurux badan, fariimo jaceyl ah laakin markuu ku nacay intaas oo dhan daaqada ayeey ka baxeen.
Waxaa sidoo kale ninka ku nacay ku ogaaneysaaa kuuma qadarinayo sidii uu kuu qadarin jiray hadii aaad ka xanaaqdo iyo hadii kaleba kalama jeclo.
Markaad qoraal u qorto ama aad wacdo wuxuu kuu soo jawaabi saacado kadib, kama ahan inuusan arkeynin qoraalkaaga balse wuxuu dhibsanayaa hadalaada.
Hadii aad Qoys tihiin oo aad guriga wada joogtaan waqti fiican kulama qaadanayo, hadii aad filin daawaneysid asiga waxa uu ku mashquulsan yahay telkiisa ama game
Hadaba ninka ku neceb ama ku nacay wuxuu leeyahay calaamado fara badan oo aaan halkaan lagu soo koobin karin. Hadii aad jeceshahay in aad sii barato waxaad ka baran kartaa halkaan erayojaceyl.com